Articles tagged 'madhuku'
Grace Mugabe sister's bail conditions relaxed 2 November 2018 HARARE - Former first lady Grace Mugabe's sister, Shuvayi Gumbochuma who was charged with fraudulently processing the sale of State land before paying for it has successfully applied to have her bail conditions relaxed. Gumbochuma, through her lawyer Lovemore Madhuku had applied to have variou...
Nash U20 secures Proton sponsorship 5 August 2017 HARARE - Sports minister Makhosini Hlongwane has challenged more corporate players to support the growth of sport in the country. Hlongwane was speaking at the unveiling ceremony of the $5 000 sponsorship package for the National Association of Secondary School Heads (Nash) Under-20 soccer fro...
2017 Copa Coca-Cola launched 25 May 2017 HARARE - Zimbabwe's school football should adopt a tracking system to ensure players who excel at age-grade tournaments are monitored, National Association for Secondary School Heads (Nash) president Johnson Madhuku has said. “As Nash we should have a database of such players and a tracking sy...
Copa adopts Fifa standards 22 April 2017 KWEKWE - This year's edition of the Copa Coca-Cola games for boys is set to adopt a new format as the organisers seeks to conform to the international standards as outlined by Fifa. Over the years, the junior schoolboy football tournament has ran with the Under-16 age group for the boys and wi...
Madhuku's reckless humour 3 August 2014 HARARE - Opposition leader and rehabilitated lawyer Lovemore Madhuku last week spewed reckless humour during a media practitioners’ gathering in Harare attacking the personalities of First Lady Grace Mugabe, superstar musician Oliver Mtukudzi and Transport minister, Obert Mpofu. Madhuku tore i...
'Biti messed up' 10 July 2014 HARARE - Tendai Biti's attempt to overthrow Morgan Tsvangirai outside congress and head off an alleged imminent transformation of the MDC into a “fiefdom for the opposition leader” was blatantly unconstitutional, a top MDC policy chief has said. Months before an extraordinary congress to put ...
Biti under fire 2 July 2014 HARARE - The wisdom or otherwise of Tendai Biti’s MDC rebels going ahead with a disputed disciplinary hearing against opposition leader Morgan Tsvangirai on Friday, despite the High Court putting the process on hold, continues to raise heated debate among Zimbabweans. While many legal experts ...
Madhuku's NCA fails to pay ex-workers 9 July 2013 HARARE Lovemore Madhuku s cash-strapped National Constitutional Assembly (NCA) has failed to pay over a dozen former employees over $121 000 after donors ditched his organisation. NCA a broad alliance of opposition parties, church groups, trades unions and civic organisations acknowledged in cour...
Madhuku loses Mugabe lawsuit 1 March 2013 HARARE - High Court Judge George Chiweshe has dismissed National Constitutional Assembly (NCA) chairman Lovemore Madhuku s referendum lawsuit against President Robert Mugabe, claiming the court has no jurisdiction to deal with the matter. Madhuku is now weighing the option of an appeal, his lawye...
Madhuku's referendum challenge heard 26 February 2013 HARARE - National Constitutional Assembly (NCA) chairperson Lovemore Madhuku has accused President Robert Mugabe of acting unreasonably, irrationally and arbitrarily when he declared March 16 as the date for the holding of a referendum. High Court Judge George Chiweshe yesterday heard Madhuku s u...
Madhuku sues Mugabe 20 February 2013 HARARE - National Constitutional Assembly (NCA) chairperson Lovemore Madhuku has filed an urgent High Court chamber application against President Robert Mugabe demanding him to extend the cut-off date for holding a referendum. Madhuku, through his lawyer Alec Muchadehama yesterday filed the appli...